Diyaarado Drone ah oo lagu weeraray saldhig mid kamida saldhigyada ciidanka Mareykanka ee Ciraaq.
Wednesday January 05, 2022 - 11:12:02
Kooxo Shiico ah ayaa weeraro loo adeegsaday diyaarado aan duuliye laheyn ku qaaday saldhig weyn oo ciidankada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Ciraaq.
Taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ay ka hortageen weerar culus oo lagu beegsan lahaa saldhigga Ceynul-asad ee dhaca gobolka Al-anbaar ee galbeedka Ciraaq.
illaa 2 diyaaradood oo Drones ah ayaa lagu weeraray saldhigga balse qalabka difaaca Mareykanka ee loo yaqaan C-RAM ayaa ka horagay, muuqaal lagu baahiyay barta Twitterka Melleteriga Mareykanka ayaa muujinayay gantaallada difaaca cirka oo dhulka soo dhigaya diyaaradaha lagu weeraray saldhigga Ceynul-asad.
"waxaan dhulka soo dhignay laba diyaaradood oo miinaysay kuwaas oo doonayay in ay weeraraan saldhigga Ceynul Asad waana fashilinimay isku daygaas" ayuu lagu yiri warka kasoo baxay isbahaysiga caalamiga ah ee Ciraaq ku duulay.
Qalfoofka diyaaradaha lasoo riday waxaa ku qornaa erayo ay kamid yihiin "u aargudka Qaasim Suleymaani", inkastoo aysan jirin cid sheegatay mas'uuliyadda isku dayga weerarkan hadane waxaa loo badinayaa in ay ka dambeeyaan taageerayaasha Iiraan ee dalka Ciraaq kuwaas oo si aad ah udiiddan joogitaanka melleteriga Mareykanka.